Miasa an-jambany… tsy jamba rafozana | NewsMada
Miasa an-jambany… tsy jamba rafozana
Tena miasa, hono, izao fitondrana izao. Aiza? Eo ny vahoaka ifotony mitsara, raha mba misitraka inona amin’izany. Misy indray ireo milaza fa tsy tafapaka aty amin’ny vahoaka, hono, ny fitaterana sy ny fanazavana ny asa sy ny zava-bita. Mba te hisolelaka sa tsy fahalalana ny ativilany sy izay tena kendren’ny fitondrana manokana?
Tsy mila taterina sy hazavaina amin’ny vahoaka ny zava-bita, raha tena miasa tokoa ny fitondram-panjakana. Asa tokony hataony andavanandro mandavantaona izany: takina sy andrasana aminy, nanaovany fianianana, nampanantenainy tamin’ny fifidianana, nahazoany toerana. Tsy hita matoa mila aseho, maizina matoa mila hazavaina…
Misy antony ao matoa tsy mitsaha-mitaraina ny ankamaroan’ny vahoaka: tsy mahatsapa inona amin’izay fihatsaram-piainana ahay, tsy mahita fiovana… Amin’izany, tsy hoe miasa jamba rafozana ny mpitondra, raha tena miasa: miasa an-jambany, matoa tsy hita izay vita. Tsy manana fandaharanasa mazava, fomba fiasa matotra, tetiandro maty paika.
Nahoana no tsy hita izay fanovana sy fiovana? Mangirika sy mitavandra fotsiny ny vola fanampiana sy trosa avy any ivelany tsinona, ka arakaraka izany ihany no ihetsehana. Raha tsy izany, arakaraka ny zava-misy eto an-toerana amin’izay mahatsaratsara toerana ny tena eo imasom-bahoaka, isehoana fa tena miasa ho an’ny ambanilanitra tokoa.
Tsy azo na mihazohazo amin’izay politika seho ivelany mampitsaboabotra ny vahoaka izay ela izay? Izao vao mikoropaka manonitra izay tsy nahoana sy tsy fantatra hatramin’izay? Hanao sy hahavita an’itsy sy iroa, hono, raha omena fotoana, mieritreritra mandrakariva ny vahoaka, tsy maintsy jerena ny tombontsoa ambonin’ny firenena…
Amin’ny fomba ahoana indray? Tsy hoe miasa jamba rafozana tsinona, fa miasa an-jambany: fahoany fahoany, na iza mitaraina na inona tsy mety. Ampy hitsarana ny raharaha, ohatra, ny delestazy tsy foana tao anatin’ny telo volana, ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly avo lenta, ny fandrobana tany… Mbola ndeha homena vahana indray?